ဘယ်အချိန်မဆို Strict ဖြစ်နေတာက အပြစ်ကြီးတစ်ခုလား? - For her Myanmar
Fitness, Letters From Heart
“နင်အပိုတွေမလုပ်နဲ့၊ ခုမှ ပဲလာများပြနေတယ်” ဆိုပြီး လူကြားသူကြား ဒေါက်ဖြုတ်တတ်သူများ သေချာဖတ်ပါ
ဒါမျိုးကတော့ ကိုယ်တွေလို လေ့ကျင့်ခန်းအရမ်းလုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကို အသေထိန်းတတ်တဲ့လူတွေနဲ့ သိပ်မစိမ်းဘူးထင်ပါရဲ့။ (အဲ့လိုပဲ ဂျင်းထည့်ရတာပေါ့။ Gym တစ်လလောက်နားနေတာ ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့ :P)
လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေမယ့် အရာတွေဆို ရှောင်တတ်တဲ့သူတွေ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အပြင်ထွက်တယ်ဆိုတာက အများအားဖြင့် ကိုယ့်အလုပ်သဘောအရဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းချက်ပြီး သွားသွားလာလာဖြစ်စေ သောက်စားရတဲ့အခါမျိုးတွေကို ဆိုလိုတာပါ။
အထူးသဖြင့် ညဘက်တွေပဲ များတော့ (အေ့လေ.. နေ့ဘက်က အလုပ်လုပ်ရတာ အားမှမအားတာ အားချိန်လေး ဆုံရတာကိုး) ကိုယ့်ရဲ့ Cheat day (စားချင်တာစားတဲ့နေ့) နဲ့ဆိုရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ပွဲတွေကဆက်ပြီး စားသောက်ရတဲ့ နေ့တွေ များလာရင်တော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ မကာမိတာ ဘာညာတွက်ပြီး မစားချင်တော့တဲ့အချိန်မျိုးတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ‘မင်းကွာ တစ်ရက်တစ်လေလေးပဲကို ဘာဖြစ်နေတာလဲ’ ဆိုပြီး အတင်းပြော အတင်းကျွေးတတ်ကြတာမို့ ဒီစာလေးကို ဒင်းတို့ဆီ အိတ်ဖွင့်ပေးစာအနေနဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယူတို့တွေ ဟိုနားဒီနားလေး ၅ မိနစ်လောက်ပြေးရင်တောင် လျှာတစ်လစ် ဟောဟဲလိုက်ပြီး အရမ်းမောတတ်ကြတယ်မလား? အိုင်တို့ကလေ ၁ နာရီစာလောက်ကို မခိုမကပ်ဘဲ ငါ ၆ ဖုထွက်ရမယ်ဟဲ့၊ ငါလက်မောင်းသားတွေ ကြွက်သားအဖုအထစ်နဲ့ ကြည့်ကောင်းလာရမယ်ဟဲ့၊ ဝတဲ့လူဆိုရင်လည်း ဘယ်လောက်အတွင်း ဝိတ်ဘယ်နှစ်ပေါင်ကျရမယ်ဟဲ့ စသည်ဖြင့် ကြွေးကြော်ပြီး တကယ်ကိုထိထိရောက်ရောက် လုပ်ရတဲ့လူတွေမို့ ဘယ်အစားအသောက်က ဘယ်လောက်ကယ်လိုရီ၊ ဘယ်ဖျော်ရည်ကတော့ ဘယ်လောက်သကြားပါတယ်၊ ဘယ်အရက်ကတော့ ဘယ်လိုမျိုး စသည်ဖြင့် တွက်ချက်ပြီးစားမှ ကိုယ်ဆော့ထားတာနဲ့ တော်ကာတန်ကာကျမှာဆိုတာ ယူတို့သိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက်လောက်က ဖြဲရဲပြီး စားလို့ အဆင်ပြေပေမဲ့ ပွဲဆက်တွေ အရမ်းများလာရင်တော့ အဲ့နှုန်းအတိုင်း ဆက်စားရင် ကျန်းမာတဲ့ ဝက်ကြီးပဲ ဖြစ်လာမှာပေါ့။ နောက်ပြီး အိုင်တို့လည်း လူတွေထဲက လူပါပဲ။ ယူတို့စားသောက်သလို အိုင်တို့လည်း အတင်းနင်းကန် စားချင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ်က တခြားလူတွေမှာ မရှိတဲ့ အရာမျိုးလိုချင်တာမို့ တခြားလူတွေထက် ပိုသည်းခံရပြီး ပိုထိန်းရမယ်လေ။ အဲဒါကို ယူတို့က စွပိုတွေလုပ်နေတာတို့၊ သက်သက်မဲ့ ဒုက္ခခံနေတာတို့၊ ပဲများပြနေတာတို့ ကြိုက်သလိုပြောနေကြတော့ ဘယ့်နှယ်လုပ်ရမလဲ… စောင့်ကြည့်ပါ.. အချိန်က စကားပြောသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ စကားပဲ ပြန်ပြောရတော့မှာပေါ့..
Related Article >>> မိန်းကလေးတွေဘာလို့ Gym ဆော့ရမှာကို ကြောက်ကြတာလဲ?
နောက်ပြီး တချို့တွေက ရှိသေးတယ်။ နင့်ဟာကလည်း ဝိတ်ကို ဒီလောက် ထိန်းချနေတယ်သာ ပြောတာ ဘာမှလည်းထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲသွားတာလည်း မဟုတ်ဘဲနက် ဆိုတာမျိုး။ ဒီမယ်အမိတို့။
အမိတို့က ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ‘ဘစ်ပတီ၊ ဘာပတီ၊ ဘူး’ လို့ နှင်တံလေး တစ်ချက်ဝှေ့လိုက်တာနဲ့ ဝုန်းကနဲ ကျသွားမယ်ထင်လို့လား? နောက်ပြီး အဆီ၊ အသားနဲ့ ကြွက်သား သင့်တင့်မျှတပြီး သူ့ဘာသာအချိုးကျကျရှိနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကရော ဘယ်လိုပုံစံအနေအထား ရှိသင့်တယ်ဆိုတာမျိုးရော ယူတို့သိလို့လား? ဝိတ်ကျ၊ အဆီကျဖို့တင်မဟုတ်ဘဲ သူ့နေရာနဲ့သူ အထုအထည် အဖုအဖောင်း အမို့အမောက်လေးနဲ့ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ရှိနေဖို့ ဆော့တာဆိုတာမျိုးရော ယူတို့နားလည်ရဲ့လား?
အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံအရ ယောကျာ်းလေးတွေထက် အဆီပိုများလို့ အစားအသောက်ကို ဒီလောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှ တော်ကာတန်ကာကျတယ်ဆိုတာမျိုးလည်း ယူတို့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးလေ။ အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ် အရပ်ကတို့ရဲ့။ ကိုယ်မလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုကို သူများလုပ်တိုင်း ဒင်းအရူးပါကွား ဆိုတာမျိုးတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့။ ပြောင်းလဲချိန်တန်နေပါပြီလို့။
အဲ့တော့ ယူတို့တွေ နောက်တစ်ခါ ပွဲတွေဘာတွေလုပ်ရင် “လာရုံနဲ့တင်ရပြီ နင့်ဘာသာစားချင်စား မစားချင်နေ” ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ပဲ ဖိတ်ပေးပါ။ အတင်းထိုးကျွေးမယ်၊ ဖြဲရဲပြီးစားမှ ရမယ်ဆိုရင်တော့ အိုင့်ချိဒေး အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး လာခဲ့ပါ့မယ်နော်.. -ျင်ခေါင်းကျယ်တာမဟုတ်သလို ယူတို့ကိုလည်း တကယ်အရမ်းအားနာလို့ပါနော်။
ပြီးတော့ လာတယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ညတစ်လေ အမုန်းဆွဲ၊ ဗုံးကြဲပြီး အားပါးတရစားသောက်မှာမျိုးရှိသလို ဘာမှမစားဘဲ ဟိုတို့ဒီတို့လေးပဲလုပ်ပြီး ပြန်သွားရမယ့်နေ့တွေလည်းရှိတာမို့ အိုင့်ကို နားလည်ပေးကြပါ။ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်နေတဲ့ အိုင့်စိတ်လေးကိုလည်း ပါရမီဖြည့်ပေးကြပါလို့ ဒီစာလေးကနေတစ်ဆင့် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော်။
ယူတို့အားလုံးကို ခင်တယ်၊ ချစ်လည်းချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ အိုင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလည်း ချစ်ရဦးမှာမို့ အချစ်ပေါ့နေလို့ မစားတာမဟုတ်ရပါကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
“နငျအပိုတှမေလုပျနဲ့၊ ခုမှ ပဲလာမြားပွနတေယျ” ဆိုပွီး လူကွားသူကွား ဒေါကျဖွုတျတတျသူမြား သခြောဖတျပါ
ဒါမြိုးကတော့ ကိုယျတှလေို လကေ့ငျြ့ခနျးအရမျးလုပျပွီး ခန်ဓာကိုယျပုံစံကို အသထေိနျးတတျတဲ့လူတှနေဲ့ သိပျမစိမျးဘူးထငျပါရဲ့။ (အဲ့လိုပဲ ဂငျြးထညျ့ရတာပေါ့။ Gym တဈလလောကျနားနတော ဘယျသူသိတာမှတျလို့ :P)
လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျပွီး ခန်ဓာကိုယျကို ထိခိုကျစမေယျ့ အရာတှဆေို ရှောငျတတျတဲ့သူတှေ အပွငျထှကျတဲ့အခါ ကွုံရတဲ့ ပွဿနာ တဈခုရှိပါတယျ။ အပွငျထှကျတယျဆိုတာက အမြားအားဖွငျ့ ကိုယျ့အလုပျသဘောအရဖွဈစေ၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ခြိနျးခကျြပွီး သှားသှားလာလာဖွဈစေ သောကျစားရတဲ့အခါမြိုးတှကေို ဆိုလိုတာပါ။
အထူးသဖွငျ့ ညဘကျတှပေဲ မြားတော့ (အလေ့ေ.. နဘေ့ကျက အလုပျလုပျရတာ အားမှမအားတာ အားခြိနျလေး ဆုံရတာကိုး) ကိုယျ့ရဲ့ Cheat day (စားခငျြတာစားတဲ့နေ့) နဲ့ဆိုရငျ ဘာမှမဖွဈဘူး။ ပှဲတှကေဆကျပွီး စားသောကျရတဲ့ နတှေ့ေ မြားလာရငျတော့ ကိုယျလုပျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးနဲ့ မကာမိတာ ဘာညာတှကျပွီး မစားခငျြတော့တဲ့အခြိနျမြိုးတှေ ရှိလာတတျပါတယျ။ အဲ့အခြိနျမှာ သူငယျခငျြးတှကေတော့ ‘မငျးကှာ တဈရကျတဈလလေေးပဲကို ဘာဖွဈနတောလဲ’ ဆိုပွီး အတငျးပွော အတငျးကြှေးတတျကွတာမို့ ဒီစာလေးကို ဒငျးတို့ဆီ အိတျဖှငျ့ပေးစာအနနေဲ့ ရေးလိုကျပါတယျနျော။
ယူတို့တှေ ဟိုနားဒီနားလေး ၅ မိနဈလောကျပွေးရငျတောငျ လြှာတဈလဈ ဟောဟဲလိုကျပွီး အရမျးမောတတျကွတယျမလား? အိုငျတို့ကလေ ၁ နာရီစာလောကျကို မခိုမကပျဘဲ ငါ ၆ ဖုထှကျရမယျဟဲ့၊ ငါလကျမောငျးသားတှေ ကွှကျသားအဖုအထဈနဲ့ ကွညျ့ကောငျးလာရမယျဟဲ့၊ ဝတဲ့လူဆိုရငျလညျး ဘယျလောကျအတှငျး ဝိတျဘယျနှဈပေါငျကရြမယျဟဲ့ စသညျဖွငျ့ ကွှေးကွျောပွီး တကယျကိုထိထိရောကျရောကျ လုပျရတဲ့လူတှမေို့ ဘယျအစားအသောကျက ဘယျလောကျကယျလိုရီ၊ ဘယျဖြျောရညျကတော့ ဘယျလောကျသကွားပါတယျ၊ ဘယျအရကျကတော့ ဘယျလိုမြိုး စသညျဖွငျ့ တှကျခကျြပွီးစားမှ ကိုယျဆော့ထားတာနဲ့ တျောကာတနျကာကမြှာဆိုတာ ယူတို့သိရငျ သိပျကောငျးမှာပဲ။
တဈပတျမှာ တဈရကျလောကျက ဖွဲရဲပွီး စားလို့ အဆငျပွပေမေဲ့ ပှဲဆကျတှေ အရမျးမြားလာရငျတော့ အဲ့နှုနျးအတိုငျး ဆကျစားရငျ ကနျြးမာတဲ့ ဝကျကွီးပဲ ဖွဈလာမှာပေါ့။ နောကျပွီး အိုငျတို့လညျး လူတှထေဲက လူပါပဲ။ ယူတို့စားသောကျသလို အိုငျတို့လညျး အတငျးနငျးကနျ စားခငျြတာပေါ့။ ဒါပမေဲ့လညျး ကိုယျက တခွားလူတှမှော မရှိတဲ့ အရာမြိုးလိုခငျြတာမို့ တခွားလူတှထေကျ ပိုသညျးခံရပွီး ပိုထိနျးရမယျလေ။ အဲဒါကို ယူတို့က စှပိုတှလေုပျနတောတို့၊ သကျသကျမဲ့ ဒုက်ခခံနတောတို့၊ ပဲမြားပွနတောတို့ ကွိုကျသလိုပွောနကွေတော့ ဘယျ့နှယျလုပျရမလဲ… စောငျ့ကွညျ့ပါ.. အခြိနျက စကားပွောသှားပါလိမျ့မယျဆိုတဲ့ စကားပဲ ပွနျပွောရတော့မှာပေါ့..
Related Article >>> မိနျးကလေးတှဘောလို့ Gym ဆော့ရမှာကို ကွောကျကွတာလဲ?
နောကျပွီး တခြို့တှကေ ရှိသေးတယျ။ နငျ့ဟာကလညျး ဝိတျကို ဒီလောကျ ထိနျးခနြတေယျသာ ပွောတာ ဘာမှလညျးထူးထူးခွားခွား ပွောငျးလဲသှားတာလညျး မဟုတျဘဲနကျ ဆိုတာမြိုး။ ဒီမယျအမိတို့။ အမိတို့က ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကို ‘ဘဈပတီ၊ ဘာပတီ၊ ဘူး’ လို့ နှငျတံလေး တဈခကျြဝှလေို့ကျတာနဲ့ ဝုနျးကနဲ ကသြှားမယျထငျလို့လား? နောကျပွီး အဆီ၊ အသားနဲ့ ကွှကျသား သငျ့တငျ့မြှတပွီး သူ့ဘာသာအခြိုးကကြရြှိနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျဆိုတာကရော ဘယျလိုပုံစံအနအေထား ရှိသငျ့တယျဆိုတာမြိုးရော ယူတို့သိလို့လား? ဝိတျကြ၊ အဆီကဖြို့တငျမဟုတျဘဲ သူ့နရောနဲ့သူ အထုအထညျ အဖုအဖောငျး အမို့အမောကျလေးနဲ့ ကဈြကဈြလဈြလဈြရှိနဖေို့ ဆော့တာဆိုတာမြိုးရော ယူတို့နားလညျရဲ့လား?
အထူးသဖွငျ့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ခန်ဓာကိုယျတညျဆောကျပုံအရ ယောကျြားလေးတှထေကျ အဆီပိုမြားလို့ အစားအသောကျကို ဒီလောကျထိနျးသိမျးနိုငျမှ တျောကာတနျကာကတြယျဆိုတာမြိုးလညျး ယူတို့သိမှာမဟုတျပါဘူးလေ။ အခွအေနတှေအေမြားကွီးရှိတယျ အရပျကတို့ရဲ့။ ကိုယျမလုပျတဲ့အရာတဈခုကို သူမြားလုပျတိုငျး ဒငျးအရူးပါကှား ဆိုတာမြိုးတော့ မလုပျကွပါနဲ့။ ပွောငျးလဲခြိနျတနျနပေါပွီလို့။
အဲ့တော့ ယူတို့တှေ နောကျတဈခါ ပှဲတှဘောတှလေုပျရငျ “လာရုံနဲ့တငျရပွီ နငျ့ဘာသာစားခငျြစား မစားခငျြနေ” ဆိုတဲ့ သဘောမြိုးနဲ့ပဲ ဖိတျပေးပါ။ အတငျးထိုးကြှေးမယျ၊ ဖွဲရဲပွီးစားမှ ရမယျဆိုရငျတော့ အိုငျ့ခြိဒေး အခွအေနကေိုကွညျ့ပွီး လာခဲ့ပါ့မယျနျော.. -ငျြခေါငျးကယျြတာမဟုတျသလို ယူတို့ကိုလညျး တကယျအရမျးအားနာလို့ပါနျော။ ပွီးတော့ လာတယျဆိုရငျလညျး တဈညတဈလေ အမုနျးဆှဲ၊ ဗုံးကွဲပွီး အားပါးတရစားသောကျမှာမြိုးရှိသလို ဘာမှမစားဘဲ ဟိုတို့ဒီတို့လေးပဲလုပျပွီး ပွနျသှားရမယျ့နတှေ့လေညျးရှိတာမို့ အိုငျ့ကို နားလညျပေးကွပါ။ မဖွဈဖွဈအောငျ လုပျခငျြနတေဲ့ အိုငျ့စိတျလေးကိုလညျး ပါရမီဖွညျ့ပေးကွပါလို့ ဒီစာလေးကနတေဈဆငျ့ တောငျးဆိုလိုကျပါတယျနျော။
ယူတို့အားလုံးကို ခငျတယျ၊ ခဈြလညျးခဈြတယျဆိုပမေဲ့ အိုငျ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျလေးကိုလညျး ခဈြရဦးမှာမို့ အခဈြပေါ့နလေို့ မစားတာမဟုတျရပါကွောငျး ပွောခငျြပါတယျ။
Tags: Fitness, gain, Letters from Heart, Loss, maintain, parties, person, strict, Weight